KOBCINTA JACEYLKA | Wararka Dalka Iyo Dibada
Dadka inta badan ayaa ku wareersan sida ay jaceylkooda u kobcin lahaayen halkan ka bogo qodobo kooban oo aad ku kordhin karto jaceylkada.
1: IS DHAAFSIGA HADIYADAHA
In ay is dhaafsadaan haddiyadaha xataa haddii ay tahay mid iska caadi ah, sida hal ubax ama shey kale ama qoraal yar oo kooban oo aad uso qorto kalmado aad u macaan oo qurux badan, taasina waxay leedahay raad-reeb aad ugu wayn dhinaca qalbiga.
shaqsiga markuu bixiyo qiimaha hadiyada lamaanihiisa wuxuu kula soo noqdaa qiimahaas waji furan oo faraxsan oo uu ka arko lamaanihiisa iyo qosol macaan oo uu ka arko bishmaha qofka uu jecelyahay, kalmad mahadnaq iyo ammaan ah oo ay si wanaagsan u soo doorato gabadhaasi ama wiilkasi, farxad iyo wanaag ka muuqda xiriirka dhinacyadiisa oo dhan, shaqsiga kale waa in sidoo kale uu lamaanihiisa wax u haddiyadeyaa.
2: KULAN WAQTI CAYIMAN
In ay waqti cayiman ay wada fadhiistaan oo ku sheekaystaan markasta, marka ay kala maqan yihiina telefoonka isku warraystaan oo mid waliba kan kale ihtimaam ku siinayo la hadalka kan kale.
Is-eegidda iyo aragtida xambaarsan jacaylka iyo iska-helidda, dareenka u dhexeeya labada qof ee wada xiriira kuma eka waajibaadka jaceylka kaliya oo la guto ama isdhaafsasho kalmado xiriir wanaagsan oo lays dhaafsado, balse intaa waxa ka badan tahay oo waxa ka mid ah ishaarooyin aan hadal lahayn oo wajigu cabiro ama u dhicidda sowtku muujinayo ama tilmaamayso eegiddu, waxaas oo dhammi waxay kobciyaan jacaylka iyo naftaba.
4: MARXABEYN IYO MACSALAAMEYN
Marka uu kaasii tagayo lamanahaga oo aad si wanaagsan u sii macasalaamayso iyo marka uu soo noqdo oo si diirran oo wanaagsan aad u soo dhowayso oo u marxabayso, waxey qeyb ka qaadataa kobcinta jaceylka iyo is qadarinta idinka dhaxeysa.
Waxa wanaagsan wiilka ama gabadha in uu lamaanihiisa ammaano oo dareensiiyo in uu ilaa xad u jecel yahay, qof kale eegiddiisa uga masayrayo jacaylka uu u qabo dartiis sidoo kale in aanu waligii qof kale la simin ama ka hormarin.
Waxaa muhiim ah in lamaanaha ay is caawiyaan midba midka kale xili walba waa uu ku baahan yahay lamaanahaga, hadii ay ahaan laheyd xiliyada murugada iyo xiliyada la wada faraxsan yahayba.
Isku day inaad waligaa cidleyn qofka ku jecel waayo dad iyo duunyaba adiga ayaa u ah mar walibana wuxuu jecel yahay inaad garabkiisa taagnato, marki uu adiga ku heysto wuxuu aminsan yahay inuu dunida oo dhan heysto waana sababta kaliya ee ruuxa kugu sii jeclaan karayo.
8: XALINTA KHILAAFAADKA
Waa in labada qof ee lamaanaha ah haday dhibaato ku timaaddo ay wada xalliyaan oo dhibka ku dhacay ay ka qaadan xoog iyo jacayl, dabaylahaasina aanay ku keenin xiriirkoodi gilgilasho sida hadduu xanuuns yimaado oo kale, taas oo noqon karta waxqabad ahaan mid la taaban karo moraal ahaan mid la isu dareensin karo, amaba lamaanahaga oo wax un ka xanaaqsan oo uu u baahan yahay naxariis iyo hadal wanaagsan oo jilicsan, iyo qof is garab taaga oo ka fududeeya arrinta dhibaysa, ogow marka aad ka xanuunsato xanuunka qofka kale wuxuu dhaliyaa miraha ugu wayn ee xiriirka iyo jacaylka labada is jecel wuxuuna ka yeelaa labada isugu dhow oo isugu jecel midkoodba kan kale.